Yeyiphi ifani engafakwanga? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Yeyiphi ifani engafakwanga?
Umbuzo, zeziphi iifani ezingateketwanga, kuvela rhoqo, kuba naphakathi kwabaseRussia bohlanga, iifani ezininzi zivela ngaphandle, singasathethi ke ngabasemzini.
Okwangoku, kukho imigaqo elula malunga nokuba ngubani amagama anganciphisiyo eRashiya.
Kwaye ke, amagama abantu ababhinqileyo ngesiphelo sesivakalisi okanye esiphela ngo-zero, umzekelo: Kuzik, Fisherman, Swan, Stankevich, njl.
Amagama amadoda, okwangoku, athambekele.
Amagama okugqibela awathathwanga nesiphelo ku-O: Gulko, Khomenko, Drozdenko, njl.
Amagama okugqibela awathathwanga Ukuphela kwangaphandle ngesikhonkwane: Dumas, Hugo, Goethe, njl. Kodwa amagama esiRashiya nawaseSlavic athambekele.
Amagama ababhinqileyo aphela kwikhonsonanti kunye nophawu oluthambileyo, nabo, abanalo utyekelo: Streplyuk, Pilgul, kodwa uPiluy wam, uPikul
Amagama hayi kwimvelaphi yaseRussia ephela kwizikhamiso -a-, -I-: uMigulya, uLoza
ezi ziphela nge -co: iLysenko, iLitvinenko, -y-: Belykh, ngokunjalo -go, -ovo, -yago
Andazi ukuba kwakutheni, kodwa umama wayedla ngokuthi kum ifani yam uNagoga ayithambekiyo, ngokungathi iyingcambu yegama ngokupheleleyo kwaye, esiphelweni, ayisosiphelo, ngokungathi ishunqiwe kusuka eGeorgia ngaphandle kwe-shvili.
Ngokwesiqhelo, xa kufuneka kukhunjulwe umgaqo omnye okanye omnye wolwimi lwaseRussia, andizami ukukhumbula amaphepha azezicatshulwa, kodwa ukufumana iitafile ezibonakalayo okanye izicatshulwa ezakhiwe ngendlela yemizobo, uluhlu.
Nantsi into esikwazile ukufumana kulo mbandela:
Vumelana, kulula ukukhumbula ulwazi. Ezi tshathi / iitafile zinokuprintwa. Ukuba usenobunzima bokukhumbula, beka la maphepha kwiindawo ezibalaseleyo apho uhlala usiya khona. Imemori ebonakalayo iya kukwenzela yonke into.
ndixelele ke ukuba ndenze ntoni nefani ethi Coleda feminine? (a). Abazange bamphembelele, kuphela kamva kuphakama umbuzo xa bafumana isatifikethi kwaye emva kokufumana idiploma, ootitshala baphendukela koochwephesha beelwimi kwaye emva koko babhala yonke indawo bengakhange bavume.
Ukuba amagama okugqibela aphela s, ke azithambekele (umfazi kunye nomntu oyindoda).
Izibongo ze-masculine eziphetha kwikhonsonanti (zithambile okanye zilukhuni) ziyaliwe, ngelixa zona zingabinjalo.
Cinga ngefani eyindoda kunye neyamabhinqa ephelisa unkqonkqoza:
Ifani yam ayithambekanga, iphelela ngaphakathi-, nangona ebuntwaneni bam bendihlala ndibhala -in, emva koko abazali bam bacacisa ukuba abanotyekelo!
Imigaqo esisiseko: amagama ababhinqileyo abagqibela kwikhonsonanti (ileta) -siRashiya nelangaphandle - abayekwanga. Kwakhona, iifani zaseRussia eziphelisa i-in-and-ayithambekiyo. Musa ukwala amagama (nawuphina, oyindoda okanye owasetyhini) ophela kwisikhamiso, ngaphandle kwengcaciso;
Kukho inani lokwahluka.
Uhlale iminyaka engamashumi amathathu kwaye ifani yam ayizange inciphe, unyana wam waya esikolweni kwaye waqala ukumala. Sibhala uKodyan, kwaye satyikitywa nguKodyan, ifani nguMoldovan.
Ezi fani ziphela zine-qu;;;;;;;;;;; ;qu; Kwakhona, amagama amadoda nabasetyhini abafane bathambekele kwisikhamiso, ngaphandle kweleta ethi ;; Amagama aphela kwi-quot; ıquot ;. Ke ndicinga ukuba le yimpendulo efanelekileyo.
Yonke into apha iyinkimbinkimbi ekuqaleni kokujonga. Kodwa kuphela ekuqaleni. Ke le mithetho yile:
Ukuba igama lokugqibela langaphandle (iGoldberg) okanye isiRashiya (iWolf) kwaye liphela ngekhonsonanti, oko kuthambekele ekubhekiseleni kwindoda (iGolide, iGoldberg), kwaye akuqubudi xa kubhekiselwa kumfazi (uhlala eyiGoldberg).
Ukuba ifani yiSlavic kwaye iphelela ngo-s, abanakuze baqubude, kungakhathalekile ukuba babini kwesini;
Amagama aphela ngaphakathi -h -amadoda atyekele ekuthini (Vulich, Vulich, Wulich), abasetyhini abafuni (Vulich - bahlala njalo).
Amagama ahambelana kunye nezibizo eziqhelekileyo okanye amagama afanelekileyo (Impumlo, Rook, Grave, Moth, Lynx, njl. Njl.) - atyekele emadodeni (Moth, Moth, Moth) kwaye awatyekelanga kubafazi (Moth yi Moth, qho). Inye kuphela: kukho iifani ezinjengeMouse (nabanye bayathanda). Ke ukuba ufuna ukutsho ukuba incwadi yomntu egama linguAnnouse Mouse ipapashiwe, ke oku akuyi kuvakala kwincwadi ye-Innocent Mouse (kuya kubonakala ngathi kuya kufuneka ucofe iigundwane), kodwa incwadi ka-Mantyi Mouse.
Izibongo eziphela ngo -ovo, -cafe, -hogo, -ago-soze zaguqa (umzekelo, uZhivago).
Amagama aphela kwizikhamiso (ngaphandle kokuxinzezelwa a) - UZola, uMorois, uDumas nabanye- awananzwanga.
Amagama kwi -ia nawo awathathwanga (Gulia). Oku kuyasebenza nakwiifani zaseFinland ku -a. Kodwa iifani ku -i zithambekele (Beria, Beria, Beria).
Kwintetho esemthethweni, amagama okugqibela awathathelwanga ku -co kunye no-(uFranco, Rushailo, Kovalenko). Kodwa kwintsomi kunye nentetho eqhelekileyo. Oku kuyasebenza nakwifani ezinqabileyo njengeTolokno, Soap, njl.
Amagama aphela ngaphakathi -ok, -ek, njl. Apha kuxoxwa. Kodwa izichazi-magama ze-stylistic zicebisa ukwehla ifani yamaduna ezinesiphelo. Umzekelo, Alexei Kotenk.
Elinye ityala elinokudideka kakhulu ziifani zaseGeorgia naseJapan. Ngamanye amaxesha banotyekelo, ke hayi. Kutshanje. Nangona kucacile ukuba iifani ezinesiphelo- awukwehli kakhulu. Kodwa igama lokugqibela leChikobava kunye neOkudzhava (zombini isiGeorgia) zinokuchukunyiswa ngokulula (umzekelo, iingoma zika-Okudzhava).
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,361.